Isheen Eenyu 12?: Fardoosaa Yuusuf: Dizaayinarii uffata aadaa Oromoo dorgommii idila addunyaa mo'ate qopheessite - BBC News Afaan Oromoo
Isheen Eenyu 12?: Fardoosaa Yuusuf: Dizaayinarii uffata aadaa Oromoo dorgommii idila addunyaa mo'ate qopheessite
"Yeroo gara biyya kee deebitee ilaaltu waan hir'ate tokko ilaalta. Huccuu keenyallee ammayyeesinee gama diinagdeen akka hin fayyadamne godhameera," jechuun waan bara 2005 yeroo jalqabaaf gara biyyaa dhuftu taajjabde dubbatti.
"Ijoollummaa koo irraa eegaleen kukuullachuu jaaladha" kan jettu ogeettin dizaayinii uffataa Fardoosaa Yuusuf biyya hambaatti mana midhaaginaatti qacaramtee hojjechuun hojii ogummaa miidhaaginaa eegalte.
Dhiyeenya kana ammoo uffatni aadaa Arsii isheen hojjette dorgommii 'Miss Progress International' biyya Italy adeemsifame damee 'best national costume' jedhuun injifateera.
"Bara 2005 Caffee Oromiyaatti nu affeeranii turan. Achi deemuuf uffata aadaa Oromoo bitachuuf yeroon ilaalu huccuun na gammachiise hin jiru ture. Baay'ee natti dhagahame" jetti ogeettin tun.
"Uffatni aadaa uummattoota biroo takka yookiin lama. Kan Oromiyaa garuu godina godinaanuu gosa uuffata aadaa 11 ol qabna. Huccuu sabaaf sablammootaa agarsiisuf baay'ee kan nama rakkisus kan Oromooti.
Hedduuminni isaa yeroo sirraa fudhata. Kam agarsiistee kam dhiista? Baay'ee si rakkisa" jechuunis heddumina gosa uffata aadaa uummatni Oromoo qabu himti.
Haa ta'u malee uuffatni aadaa Oromoo waltajjiilee biyya keessaas ta'e idil addunyaatti hanga barbaadamu mul'achuu dhiisuunsaa xiiqii akka itti uume kan himtu Fardoosaa Yuusuf, yaada "namni tokko jijjiirama fiduu danda'a" jedhuun indaastrii faashinii fi dizaayinii uuffata aadaatti galuushee nutti himte.
Turtiin dizaayinar Fardoosaa Yuusuf walin taasifne akka armaan gadiitti katabneerra. Dhiyaadhaa.
BBC: Oromiyaa fi qabeenya isheen qabdu akkamin ibsita?
Fardoosaa: Hojiilee adda addaa waan dalaguuf hojii dizaayinii uuffataa qofa hojii koo godhee hojjechaa hin turre. Kanaafu waa'ee huccuu kana xiiqiitu na jalqabsiise. Ta'us garuu waltajjiilee gurguddaa irratti agarsiisa uuffata aadaa qopheesen jira.
BBC: Dhiyeenya kan uuffatni haadha siinqee ati hojjette badhaasa idil addunyaa 'Miss Progress International' jedhamu injifateera. Dorgommii akkanaa mo'achuun miira akkamii sif kenna?
Fardoosaa: Qisaannat dorgomtee huccuun haadha siinqee ani hodhe addunyaarratti moo'uunsheetin ani huccuu aadaa Oromoo sadarkaa geessuu qaburra akkan hin geessine natti dhagahame.
Osoon hojjedhee kana caalaa hojjechuu danda'a jedheen yaade. Ani akka Fardoosaatti jijjiirama xiqqoo fiduun danda'a jedheen eegale. Ani namoota bebbeekkamoo fi artiistota Amaaraa uuffata aadaa Oromoo nan uffisa.
Aadaa isaanii nutu beeksisaa ture. Akkuma kan isaanii beeksisaa turre isaanis kan keenya beeksisuu qabu.
BBC: Angawoota biyya alaa uuffata aadaa Oromoo ni uffista. Pirezidaantii Ameerikaa uffisuuf yaada akka qabdu dubbattee turte. Tiraamp maaliif filatte?
Fardoosaa: Tiraamp Afriikaa gad-xiqqeessee ilaala. Garuu biyya guddoo inni bulchu san namni Afriikaa akka asin akka gahe quba hin qabu.
Garummoo jaalannes jibbines pirezidaantii Ameerikaati. Kanaafuu dimokiraasii inni amma ittin bulchaa jiru, akkaataa inni Ameerikaa itti bulchu waggaa kuma meeqa dura namni Oromoo jedhamu akka isa caalaa bulchaa ture hubachiisuf isa filadhe.
Yoon carraa sana argadhee uuffata abbaa gadaa isa uffisu waa'ee gadaa itti himee ilaalcha Afriikaaf qabu akka jijjiiruuf isa filadhe.
BBC: Sadarkaa uuffatni aadaa Oromoo yeroo ammaa itti jiru fi sochii dizaayinarootaa akkamitti ilaalta?
Fardoosaa: Akka Itoophiyaattu miidiyaaleen keenya irratti dalagaa hin jiran. Garuu bakka irra geenye kana komachuuf osoo hin taanee itti adeemaa jirra.
Akka addunyaattimmoo nu hafa. Hindiin huccuu takka kan Saari jedhamtu qabdi. Hindii deemee ilaalen jira. Huccuu takka aruuzaaf bareechanii tolchanii yeroo doolaara 20,000n gurguran ija kootin argeera. Kanaafu huccuun keenya akka huccuu Saari sana addunyaarratti akka beekkamu fi namni biraan akka uuffatu gochuu qabna.
Addunyaa dhiisi nuti akka Oromottillee waan Oromiyaan qabdu waan sirriitti beeknu natti hin fakkaatu. Aadaa nama boonsu qabna. Dimookiraasii amma addunyaan ittin bultus Oromootu qaba. Kanaafu baay'ee heddu waan ta'ef akkattin ibsu baay'ee natti ulfaata.
BBC: Haala yeroo ijoolummaakee fi imala gara Kaanaadaa nutti himi?
Fardoosaa: Ani Dirredhawaattin dhaladhe. Yeroo dheeraa garuu Kaanaadaan jiraadhe. Kaanaadaa bara 1992ttin deeme. Isa dura baati shanif Keeniyaan ture. Aadaa koo fi huccuu aadaa koo nan jaaladha. Gaafan Keeniyaarraa gara Kaanaadaa deemus uuffata aadaa Oromoo uffadheen deeme.
BBC: Kaanaadaatti hojii miidhaginaa (makeup) hojjetaa turte. Akkamiin eegalte?
Fardoosaa: Biyya Kaanaadaatti jalqaba mana miidhaaginaa tokko keessattin qacaramee hojjechuu eegale. Sana booda achii bahee mana rifeensaa fi bareedinaa banadhee waanuma bareedinaa kana hojjechuu eegale. Moodelummaas yaalen jira.
BBC: Sana booda garaan akkamiin gara biyyaa si yaade?
Fardoosaa: Achi teenyee akkaataan biyya keenya itti ilaalaa turretu jira. Yeroo biyya keetitti deebitee ilaaltu waan hir'ate tokko agarta. Huccuu keenyallee ammayyeesinee gama diinagdeen akka hin fayyadamne godhameera. Namni tokko jijjiirama fiduu danda'a. Yeroo hunda yoo agarte nuti "aadaan keenya cunqurfamte. Afaan keenya bade" jennee haasofna. Kanaafuu haasaa bira darbee namuu waan danda'un gumaachuu qaba jedheen gara biyyaa deebi'e.
BBC: Gara biyyaa dhuftee hojii dizaayinii uuffata aadaa eegaltee. Imalli hojii dizaayinii uuffataa maal fakkaata ture?
Fardoosaa: Traamp Afriikaa gad-xiqqeessee ilaala. Garuu biyya guddoo inni bulchu san namni Afriikaa akka asin akka gahe quba hin qabu.
Akka addunyaattimmoo nu hafa. Hindiin huccuu takka kan Saari jedhamtu qabdi. Hindii deemee ilaalen jira. Huccuu takka aruuzaaf bareechanii tolchanii yeroo doolaara 20,000n gurguran ija kootin argeera. Kanaafu huccuun keenya
akka huccuu Saari sana addunyaarratti akka beekkamu fi namni biraan akka uuffatu gochuu qabna.
BBC: Uffata aadaa Oromoo uuffataalee biyyaalee Afriikaa biroo waliin makteellee ni hojjetta. Kun maalifi?
Fardoosaa: Nuti as keessatti walitti wacuu dhiisnee uuffatni keenya biyyaan alatti Afriikaa keessatti akkasumas Awuroopaa fi Ameerikaa dabalatee gara aadunyaa biraatti akka dagaagu waan hawwuufi.
BBC: Dukkaana uffata aadaa Firaans magaala Paaris keessatti banuuf yaada akka qabdu dhagaheen ture. Dhugaadhaa?
Fardoosaa: Eeyyen dhugaa dha. Michuukoo biyya Senegaal jiru walin hojii qonnaatti seenuuf yaada qabna. Michuu nama kanaa Firaans jiraattutu hojiikoo erga ilaaltee booda "maalif biyya Faransaayitti dukkaana hin bannu?" jettee na gaafatte. Kanaafis mari'annee suuqicha banuuf murteesine.
Ani amma jala jalaa huccuu hodhaan jira. Yeroo gabaabaatti suuqicha ni banna.
BBC: Dhumarratti waa'ee karoora kee gara fulduraa nutti himi
Fardoosaa: Ijoollee dargaggoota waan kanatti jiran jajjabeessuun barbaada. Dabalataan yeroo arganne hunda namoota dhiibbaa uumuu danda'an uuffata keenya uuffisu qabna. Namni kanaan nu caala. Gama miidiyaatinis sagantaa hojjechuuf yaadaan jira.